Sida loo Sameeyo Email si uu uga soo kabto Macaamiil | Martech Zone
Talaado, July 14, 2009 Jimco, Juun 24, 2016 Douglas Karr
Inta badan suuqleydu waxay ku shaqeeyaan helitaanka, koraan, sii xeeladaha. Macaamiil hel, korodhso macaamiisha isla markaana sii hayso macaamiisha. Kadib markii a Shirka Webtrends, Sidoo kale waan bartay taas soo kabashada macaamiishii hore waa istiraatiijiyad weyn.
Tan iyo markii aan kaqeyb galay shirka, waxaan isha ku hayey dib-u-hawlgal ama olole soo kabasho. Dhawaan, aniga ayaa dilay Boong koontada wireless. Adeeggu si fiican buu u shaqeeyey oo wuxuu lahaa codsi aad u fiican oo iPhone ah oo isku xidha madaar kasta oo ka qayb qaadanaya shaashadda. Anigu kama xidhin koontada adeegga darteed because wadada ayaan ka maqanahay markaa uma baahnin mar dambe.
Markii aan helayay emaylka, waxaan la dhacay muuqaalada, qaabeynta iyo naqshad la'aanta. Muuqaal kasta oo emaylka ka mid ah si taxaddar leh ayaa loo qaabeeyey oo si wanaagsan loo fuliyey:
brand - emaylku si adag ayaa loo calaamadeeyay sidaa darteed ma jiro wax wareer ah oo ku saabsan soo diraha.
Message - waxaa jira wicitaan aad u xoog badan oo soo koobaya e-maylka sidaa darteed uma baahnid inaadan sii akhrin haddaadan rabin.
U bandhigidda - waxaa jira ogeysiis ah a bixinta gaarka ah, kor u qaadista xiisaha akhristaha si ay si qoto dheer u sii qotaan.
Qiimaha - ka hor intaadan sheegin dalabka, Boingo wuxuu waxtar u leeyahay marka hore inuu ku ogeysiiyo waxa ka fiicnaaday adeegooda! Waxay sidoo kale dhab ahaantii la socdaan emailka oo dhan PPS oo ku tuuraya dhowr astaamo dheeri ah.
Sii faahfaahin - si adag ugu dhiirran nuqul ka mid ah farriinta ayaa ah faahfaahinta dhabta ah ee la soo bandhigayo.
Authority - farriinta waxaa saxeexay Madaxweynaha dhabta ah iyo agaasimaha guud. Tani waxay u gudbineysaa macaamilka sida ay muhiimka u yihiin… farriintu waxay ka timaadaa xagga sare! (Dabcan, waan ogahay inaysan ahayn… laakiin tixgelinta ayaa aad muhiim u ah.
Survey - kuma filna? Boingo aad ayey u daryeelaan waxayna jecelyihiin inay ogaadaan sababta. Haddii aadan ka faa'iideysan dalabkan, waxay ugu yaraan jeclaan lahaayeen inay maqlaan sababta. Sahaminta ay qorsheeyeen waxay ahayd mid gaaban, macaan oo illaa heer ah.
Fikradayda, tani waa olole si aad ah loo qaabeeyay oo la fuliyay. Ma waxay iga dhigtay inaan cusboonaysiiyo koontadayda? Maahan markan - maadaama aanan awoodin adeegsiga adeegga. Nasiib wanaag, taasi waxay ahayd mid ka mid ah xulashooyinka sahanka la weydiinayo sababta aanan u cusbooneysiin doonin. Miyaan cusboonaysiin doonaa adeegayga Boingo markaan ku soo noqdo wadada mar labaad? Xaqiiqdii!
Tags: boogoolole emailsida loo qorsheeyo emayl dib loogu soo celiyoguuleystaguuleysta ololaha
Jul 15, 2009 markay ahayd 6:25 AM
Taasi waa emayl qabow!
Badanaa waxaan helaa emayl aad u xun. Laakiin waxaan blog ku saabsan iyaga! Waxaan xiriiriyaha ku dhejinayaa foomka shabakadda ee faallooyinkaan haddii aad xiisaynayso qashinka aan badanaa helo.
Jul 16, 2009 markay tahay 2:08 PM
Talo weyn ayaa u ah qof kasta oo ka fiirsanaya u adeegsiga emaylka hab lagu ballaadhinayo magacooda
Jul 17, 2009 markay ahayd 10:05 AM
Hal dhibaato ayaan halkan ku arkaa. Dad badan oo adeegsadayaasha ganacsiga ah ayaa leh sawirada laga xayiray Muuqaalkooda. Tusaale ahaan markii aan helo email-ku-ogeysiis, naqshadeynta ayaa ah waxa iigu dambeeya ee aan halkaas ku arko. Had iyo jeer waxaan arkaa dhowr sanduuq oo qoraal ah oo kadis ah oo emayl ka dhigaya wax aan macquul aheyn in la akhriyo. Markii aan abuureyno ololeyaal dabagal ah oo emayl ah, waxaan isku dayeynaa inaan wax ka dhigno mid fudud, mid shaqsiyeed iyo mid gaaban, waxaana helnaa jawaabo macaamiil badan.
Jul 17, 2009 markay tahay 12:34 PM
Emailada HTML wali wey sii kordhayaan. Markii aan ka shaqeynayey shirkadda 'ExactTarget' dhawr sano kadib - e-maylada HTML waxay ahaayeen ficil ahaan kuwo ka reeban, laakiin tirakoobyadii ugu dambeeyay ee aan akhriyay wuxuu ahaa 85% + korsasho. Sidoo kale, aaladaha mobilada ayaa sifiican uga tarjumaya HTML (oo koraya). iPhone iyo Crackberry waxay si xamaasad leh u maareeyaan emayllada HTML.
Waxaan rumeysanahay soo celinta e-maylka HTML inay aad uga culus tahay bixinta marka laga reebo.